Home Wararka Ciidamo ka tirsan AMISOM oo qarax lagula eegtay degmada Mahadaay
Ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa qarax lagula eegtay duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen masuuliyiinta deegaanka.
Qaraxa lala eegtay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Burundi ayaa la geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba sida ay sheegeen saraakiil ka dhanka amaanka oo ku sugan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe.
“Qarax miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa ku qarxay kolanyo ciidanka Burunta ah, ka dibna rasaas xooggan ayay fureen” ayuu yiri sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo intaasi ku daray “Khasaare waa jiraa laakiin dib ayaan ka soo sheegi doonaa”.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa bartooda internet-ka ku sheegtay in qaraxa miino ee ka dhacay duleedka degmada Mahadaay ay ku dileen ilaa 7 askari oo ka mid ahaa kolanyada ciidamada Burundi islamarkaana uu gabi ahaanba burburay mid ka mid ahaa gaadiidka qaraxa uu haleelay.
Dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa marar badan qaraxyo miino ah la beegsaday Ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo ku socdaalaayay deegaano ka tirsan Gobolada Shabeellaha Dhexe. Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Burundi oo saaka qaraxa miino lala beegsaday iyo khasaaraha kasoo gaaray.
Burundi waa dalka 2aad ee ciidanka ugu badan u soo diray Soomaaliya khiyaastii 5,432 askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ayaa ku sugan Soomaaliya. sidoo kale waa dalkii 2aad ee ciidamo u soo dira Soomaaliya, askartiisii ugu horreysay waxay Muqdisho soo gaartay December 2007. Dalalka kale ee ciidanka ugu deeqay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxaa ka mid ah Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Uganda.